राधाकृष्ण मैनालीको जवाफ,‘एमालेको विरोध गर्न पुस्तक लेखेको होइन’ - Naya Patrika
राधाकृष्ण मैनालीको जवाफ,‘एमालेको विरोध गर्न पुस्तक लेखेको होइन’
प्रकाश गुरागाईं, काठमाडौं | चैत ०५, २०७३
राधाकृष्ण मैनाली झापा आन्दोलनका चर्चित नेता हुन् । तत्कालीन माले हुँदै एमाले पार्टी बनाउन उनको विशेष भूमिका थियो । ०४८ पछि एमालेमा उनी शक्तिशाली नेतामा गनिन्थे । एमालेबाट पटक–पटक मन्त्रीसमेत भए । तर, ०५८ मा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले सत्ता हातमा लिएपछि उनी राजाको मन्त्रिपरिषद्मा सामेल भए । एमालेले कारबाही गर्‍यो । गणतन्त्र आएपछि माओवादी प्रवेश गरे । केही समयअघि फेरि एमाले प्रवेश गरे । उनले भर्खरै ‘नलेखिएको इतिहास’ पुस्तक प्रकाशन गरेका छन् । सो पुस्तकको पार्टीभित्रैबाट आलोचना भएको छ । सो पुस्तकमा केन्द्रित भएर प्रकाश गुरागाईंले गरेको संवाद ।
भर्खरै तपाईंले लेख्नुभएको पुस्तक ‘नलेखिएको इतिहास’ सार्वजनिक भयो । किन लेख्नुभयो ?
पुस्तक लेख्न तीन वर्षदेखि केही साथीले उत्प्रेरित गरिरहेका थिए । पहिला लेख्ने गरेको मान्छे, पछिल्लो समय बानी हराउँदै गएको थियो । फेरि सुरु गर्न गाह्रो भयो । तर, लेख्न सुरु गरेपछि धेरै समस्या भएन । यो पुस्तक मैले भोगेका र देखेका घटना र तिनको विश्लेषण हो । पुस्तक प्रकाशन भइसकेपछि कतिपयले ‘यतिवेला किन यस्तो पुस्तक लेख्यो ?’ भनेर आशंका पनि गरे । लेख्न मन लागेर लेखियो र लेखिसकेपछि प्रकाशन भयो । यसमा अन्यथा सोच्नुपर्ने कुनै विषय छैन । अधिवेशनको छेक पारेर वा चुनावको छेक पारेर आफूअनुकूल वातावरण बनाउन पुस्तक प्रकाशन गरेको होइन । न त कोहीसँग साटो फेर्न नै लेखिएको हो । अन्य अर्थ लगाएर घोचो तेस्र्याउनु ममाथिको अन्याय हो । यो पुस्तक विशुद्ध मेरो वैयक्तिक अनुभूति र भोगाइ हो ।
राधाकृष्ण मैनाली, नेता, एमाले
राजनीतिक सक्रियता देखाउन पुस्तक लेख्नुभएको आरोप लागेको छ नि ?
मान्छेलाई केही न केही काम गर्न मन लाग्नु स्वाभाविकै हो । राजनीतिमा अतिसक्रिय हुँदा लेख्ने समय हुँदैन । सक्रियता कम भएपछि लेख्ने समय पाइन्छ । अरूले गीत गाउलान्, नाच्लान्, घुम्न जालान् । समय सदुपयोग गर्ने धेरै उपाय हुन सक्छन् । मैले लेखेँ । सक्रिय हुन खोज्नु मान्छेको गुण नै हो । सक्रिय हुन खोज्दा गलत अर्थ नलगाए हुन्छ । लेख्नका लागि सहज वातावरण बन्यो लेखेँ । अब यसलाई ‘राजनीति गर्न नपाएर लेख्यो’ भनेर घोच्नु बेकारको कुरो हो ।
तपाईंको पुस्तक कम्युनिस्ट इतिहासको दस्ताबेज हो ?
यो कम्युनिस्ट पार्टीको दस्ताबेज मात्र होइन र मेरो निजी वृत्तान्त मात्र पनि होइन । आत्मवृत्तान्त वा कम्युनिस्ट इतिहास मात्र पनि होइन । यसमा धेरै कुरा मिसिएका छन् । कृष्णप्रसाद भट्टराई र शेरबहादुर देउवासँगका मेरा सम्बन्ध र भोगाइ पनि छन् । धेरै बाहिर नआएका र नलेखिएका कुरा बाहिर ल्याउने प्रयास गरेको छु । त्यसकारण यसका विषयवस्तु विविध छन् ।
नलेखिएको इतिहास लेख्ने नाममा इतिहास नै बंग्याउनुभयो भन्ने आरोप एमालेभित्रैबाट लाग्यो नि ?
कहाँ बंग्याइयो, त्यो भन्नुपर्‍यो । तथ्यसहित आउनुपर्‍यो । आरोप त लगाए होला । तर, यो ठाउँमा बंग्याइयो भनेर तर्कसहित आउनुपर्‍यो । भावनामा बंग्याइयो कि, कुरामा मात्र बंग्याइयो कि, नभएको कुरो लेखियो कि, के भयो त ? आधारैविना ‘बंग्याइस्’ भनेर हुँदैन । तथ्य र तर्क आए थप खोज गर्न सकिन्छ ।
तपाईंसँग माधव नेपालले नै चित्त दुखाउनुुभयो । ०४६ को आन्दोलनका वेला गणतन्त्र ल्याउन भारतीय सेना बोलाउने प्रस्ताव गरेको भन्ने कुरा उहाँले खण्डन गर्नुभयो नि ?
त्यतिवेलाको बैठकमा मैले देखेको–सुनेको कुरा हो । म अहिले पनि झलझली सम्झिरहेको छु । मेरो एकातिर मदन कमरेड (मदन भण्डारी) बस्नुभएको थियो । अर्कोतिर सिपी (मैनाली) हुनुहुन्थ्यो । सामुन्ने माधव (नेपाल) हुनुहुन्थ्यो । उहाँले गणतन्त्रका लागि भारतीय सेना बोलाउने प्रस्ताव गरेकै हो । त्यसको पुष्टि त उहाँले त्योभन्दा पछाडि सार्वजनिक रूपमा भनेका कुराले पनि गर्छ । ०४८ तिरको मूल्यांकन मासिकमा भारतीय बोर्डरमा भारतको सहयोगमा हतियार जम्मा गर्न खोजेको भनेर आफैँले भन्नुभएको छ । अरू पत्रिकामा पनि आएको छ । त्यो मैले बंग्याएको होइन । उहाँको प्रस्तावलाई पार्टीले अस्वीकार गरेकै हो । दुनियाँलाई ढाँटे पनि म आफूले आफैँलाई ढाँट्न सक्दिनँ । मैले मानसम्मान पाउन वा आफू महान् बन्न लेखेको होइन । जे देखेको थिएँ, त्यही लेखेँ ।
तपाईंले कुण्ठा पोख्न लेख्नुभएको भनेर माधव नेपालले भन्नुभयो ।
उहाँहरूमध्ये कसैले कुण्ठा हो भने, कसैले दुराग्रह हो भने, कसैले विक्षिप्त मन हो भने, आक्रोश हो पनि भने । तर, यसकारणले कुण्ठा हो वा आक्रोश हो भनेर कसैले भनेन । जसले यसो भनिरहेको छ उसैले कुण्ठा बोकिरहेको छ ।
०४६ मा तत्कालीन माले र माक्र्सवादीका को–को नेता भारतसँग निकट हुनुहुन्थ्यो ?
त्यो म धेरै भन्न चाहन्नँ । मैले भारतपरस्त र भारतविरोधीको विवेचना गर्न खोजेको होइन । त्यहाँ उल्लेख भएका पात्रलाई बिल्ला भिराउन खोजेको पनि होइन । त्यस्ता पात्र थिए । तर, अहिले म त्यो भन्न चाहन्न ।
पुस्तक प्रकाशन भएपछि एमाले अध्यक्ष केपी ओली पनि खुसी हुनुभएन । पार्टीका नेतासँग पुस्तक प्रकाशनअघि कुनै छलफल भएन ?
यो पार्टीको दस्ताबेज होइन । मेरो पुस्तक हो । छलफल गर्नु आवश्यक थिएन । केन्द्रीय समिति, पोलिटब्युरो वा स्थायी समितिबाट पास गराउनुपर्ने जरुरी थिएन ।
पुस्तक प्रकाशनपछि एमालेमा तपाईंलाई कारबाही नै गर्ने कुरा पनि आयो नि ?
त्यो उहाँहरूलाई नै सोध्नुस् । किन चर्का कुरा गर्नुभयो, किन घरैबाट निकालुम्लाझैँ गर्नुभयो त्यो म जान्दिनँ । मलाईचाहिँ पार्टीका साथीहरूले प्रशंसा गर्लान्, नेताहरूले कार्यालयमा बोलाएर धन्यवाद देलान्, स्वागत गर्लान् अथवा अभिनन्दन गर्लान् र खादा नै ओढाउलान् भन्ने लागेको थियो । त्यत्तिको मिहिनेत कसैले गरेको थिएन । अब मूल्यांकनमा कोही कम वा बढी होला । तर, मैले एमालेको विरोध गर्न पुस्तक लेखेको होइन । नेताहरूले दुत्कारेर जालान् भन्ने लागेको थिएन । जुन रूपमा उहाँहरूले भाषणबाजी गरेर हिँड्नुभयो विज्ञप्तिमा भने त्यस्तो देखिनँ मैले ।
पुस्तक आइसकेपछि पार्टी नेताहरूसँग भेटघाट सम्पर्क छ कि छैन ?
छैन । उहाँहरूले बोलाएको पनि छैन । म गएको छैन । मेची–काली अभियानमा जानका लागि पार्टी कार्यालयबाट प्रस्ताव आएको थियो । तर, मेरो स्वास्थ्य ठीक छैन । औषधि खाइरहनुपर्छ । त्यसो हुनाले गइनँ । नेताहरू भने सम्पर्कमा हुनुहुन्न । बरु अन्य पाठकले धन्यवाद दिएका छन् । पुस्तक आएपछि मलाई अमेरिका र अस्ट्रेलियाबाट पनि फोन गरेर धन्यवाद दिए ।
पुस्तक आएपछि कोही नेताले धन्यवाद दिनुभएन ?
दिएका छन् । पुस्तकमा शेरबहादुर देउवाबारे उल्लेख छ । उहाँले पढ्नुभएछ । धन्यवादै भन्नुभयो । बुद्धिजीवी क्षेत्रबाट धेरै धन्यवाद आयो । मैले हाम्रा नेताका धेरै राम्रा कुरा लेखेको छु । तर, कतिपय मिडियाले जे नकारात्मक कुरा छन् तिनै कुरा मात्र छापिदिएका कारण विवाद भएको हो । यसमा केपी, माधव र सिपीका कमजोरीका कुरा पनि छन्, प्रशंसाका कुरा पनि छन् । तर, मिडियाले केपी वा माधवको विरोधमा लेखेजस्तो पारिदिए । झलनाथ महासचिव हुँदा माधव दोस्रो तहको नेता हुनुहुन्थ्यो । उहाँको सक्रियतामा नै पार्टी माथिल्लो अवस्थामा पुग्यो । ०४७ को संविधान माधवकै सक्रियतामा बनेको हो । उहाँले धेरै राम्रो काम गर्नुभयो । मैले लेखेको यी कुरा मिडियाले बाहिर ल्याएनन् । केपीकै बारेमा पनि मैले राम्रा कुरा लेखेको छु । उहाँ निम्नवर्गीय परिवारको मान्छे । उहाँको बाल्यकालको कुरा यथार्थ रूपमा लेखेको छु । उहाँ निम्न वर्गको परिवारबाट उठेर यो देशको प्रधानमन्त्रीसमेत हुनुभयो । मैले यसो लेखेर के अपराध गरेँ ? तर, महाकाली सन्धिको सन्दर्भमा उहाँको भूमिका नकारात्मक नै हो । अझै भन्छु । मिडियाले त्यही मात्र उचाले । मैले गणेशमानजीको प्रशंसा गरेको छु । महेन्द्रनारायण निधिको व्यक्तित्वबाट त म प्रभावितै भएको हुँ । त्यसैले मान्छेका सकारात्मक र नकारात्मक दुवै कुरालाई मैले लेखेको छु । पुस्तक नपढी कसैले सुनाइदिएको भरमा मेरो आलोचना भएको छ । नेताहरू पुस्तक नपढी अरूले सुनाइदिएको भरमा धारणा बनाउँछन् । गलत नै यहीँ भएको छ । समग्र पुस्तक पढेर मात्र टिप्पणी गर्न मेरो आग्रह छ । बरु पुस्तक नपाउनुभएको भए दोस्रो संस्करण पनि आउँदै छ । खासगरी नेतागणलाई मेरो अनुरोध छ, पढेर मात्र टिप्पणी गरिदिनुहोला ।
दोस्रो संस्करणमा पुस्तक परिमार्जन हुन्छ ?
आधारभूत कुरो परिवर्तन हुँदैन । खालि केही तथ्यांकमा गल्ती भएका कुरा मात्र सच्याइन्छ । केही तिथिमिति बिग्रिएछ, कसैको नाम, कसैको थर बिग्रिएछ । केही घटना पनि यताउता भएछन् । केही जेलमा सँगै बसेका साथीको नाम पनि छुटेछन् । कम्प्युटर दिमाग बनेन, त्यहीकारण यी कुरा छुटे । छुटेका र गल्ती भएका कुरा मात्र सच्याइन्छ ।